Istanbul avy amin'ny fomba fijery tsy mety amin'ny sary | Famoronana an-tserasera
Ny fanombohana, na fantatra ao amin'ny firenentsika hoe Origin, dia tafiditra ao fanovana amin'ny fomba fijery amin'ny sehatra isan-karazany izay nanodinanan'ny tontolon'ny nofinofisin'ilay mahery fihetsika tamina effets sary mahavariana fotsiny.
Amin'ity fomba fanodikodinana ity tontolo manodidina antsika ity no misy ilay artista Tiorka Ayidin Büyüktas aingam-panahy hanao toy izany koa amin'ny trano ary ny habakabaka an-drenivohitra Torkia. Saripika mahatalanjona amin'ity tanàna ity ahafahanao mamantatra ny rafitr'ireo trano tandindona handalo alohan'ny vokatra izay hahitantsika ny sisiny sy ny lohany rehetra.
Ny mason'ny vorona dia mikasa izany mihazakazaka mankany amin'ny mpijery izy ireo toy ny hoe miakatra ny tany, miarina eo alohan'ny fijerin'ny maso ary nafindra amin'ny fomba hafa hitadiavana an'io tanàna tiorka tsara tarehy io isika hahitantsika zoro vaovao.
Ny andiany nomerika "Flatland" nataon'ny mpanakanto Tiorka Ayidin Büyüktas manodikodina ny araben'i Istanbul hanome làlana mankany an-tanàn-dehibe tsy azo antoka tanteraka izay manova tanteraka ny fomba fijerin'ny mpijery.
«Mipetraka any amin'ny toerana izay tsy mahasarika ny saintsika ny ankamaroan'ny fotoana, toerana izay ovay ny fahatsiarovantsika, toerana izay anoloran'ilay mpanakanto refy hafa«Hoy i Büyüktas. Ireo sanganasa ireo dia natao hampisehoana a fomba fijery somary tantaram-pitiavana ary mahatsikaiky miaraka amin'izay toerana hahitana trano fantatry ny mponina rehetra amin'ity tanàna Tiorka ity.
Ny tetikasa dia aingam-panahy avy amin'ny novelom-panesoana "Flatland: tantaram-pitiavana misy habe maro." Ity dia tantaran'ny tontolo roa-habe ianjadian'ny tarehimarika geometrika. Manana fampahalalana bebe kokoa momba ny asan'ity mpanakanto tiorka ity ianao Facebook ary ao Instagram. Toy ny mahazatra, habaka virtoaly roa ahafahanao mahita sanganasa manana kalitao tena tsara toa an'i Ayidin Büyüktas izay mampiseho antsika ao anatin'ireo andian-tsary nomerika izay mampiasa drôna ary rindrambaiko 3D.
Wakui, etsy ankilany, mitondra antsika hamaky an'i Tokyo miaraka amin'ny sariny mahavariana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Saripikan'i Istanbul namboamboarina tamin'ny endrik'ilay sarimihetsika Origin